အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ shopping ထွက်နေ တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ shopping ထွက်နေ တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ
အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ shopping ထွက်နေ တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ… ပုရိသပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းစွဲ မော်ဒယ်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ကို မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုလောက်အောင် သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေက ပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ ထူးခြားမှုတွေ ဆိုရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ သူမရဲ့ ဆက်စီ ကျကျ အမိုက်စားပုံေ လးတွေ ဟာ ဆိုရင်လည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေပန်းစား လူကြိုက်များတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ယခုလက်ရှိမှာတော့ သူမက အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီး photo shooting အမိုက်စားလေးတွေကို လက်ခံရိုက်ကူးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အောင်ြ မင်ပြီး ပရိသတ်ချစ်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုဖက်ရှင်လေးတွေပဲ ဝတ်ဝတ် တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပြီး ထူးခြား လှပလာတဲ့ မိုးမြင့်သဇင်ကတော့ အခုလက်ရှိမှာလည်း အမိုက်စားပုံလေးတွေနဲ့ ခြွေချလိုက်ပြန်ပါပြီနော်။
ခေါင်မိုးထပ်မှာ ဘောင်း ဘီအတိုလေးနဲ့ မိမိုက်နေအောင် ပိုစ့်ပေးဓါတ်ဖမ်း နေတာဖြစ်လို့ ပုရိသတွေ ရင်ကို လှုပ်ခတ်သွားမိအသေအချာပဲမို့ ချစ်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန် လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ကဲ….ပရိသတ်တွေကလည်း မော်ဒယ်လ် မိုးမြင့်သဇင်ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အသည်းလေးတွေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့နော်.. ။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ ဆက် လက် လျှောက်လှမ်းမယ့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးကြမယ်မလား……. ။
ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးေရ… ပုရိသပရိသတ္ေတြရဲ႕ အသည္းစြဲ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ မိုးျမင့္သဇင္ ကို မိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေလာက္ေအာင္ သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။ သူမရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အၿပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္းအလွေတြက ပုရိသေတြကို ဆြဲေဆာင္ေနတဲ့ ထူးျခားမႈေတြ ဆိုရင္လည္း မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ သူမရဲ႕ ဆက္စီ က်က် အမိုက္စားပုံေ လးေတြ ဟာ ဆိုရင္လည္း ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။
ယခုလက္ရွိမွာေတာ့ သူမက အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္ၿပီး photo shooting အမိုက္စားေလးေတြကို လက္ခံ႐ိုက္ကူးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေအာင္ျ မင္ၿပီး ပရိသတ္ခ်စ္တဲ့ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားေနတာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္လိုဖက္ရွင္ေလးေတြပဲ ဝတ္ဝတ္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုၿပီး ထူးျခား လွပလာတဲ့ မိုးျမင့္သဇင္ကေတာ့ အခုလက္ရွိမွာလည္း အမိုက္စားပုံေလးေတြနဲ႔ ေႁခြခ်လိုက္ျပန္ပါၿပီေနာ္။
ေခါင္မိုးထပ္မွာ ေဘာင္း ဘီအတိုေလးနဲ႔ မိမိုက္ေနေအာင္ ပိုစ့္ေပးဓါတ္ဖမ္း ေနတာျဖစ္လို႔ ပုရိသေတြ ရင္ကို လႈပ္ခတ္သြားမိအေသအခ်ာပဲမို႔ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြ ၾကည့္ရႈေစႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္ လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ကဲ….ပရိသတ္ေတြကလည္း ေမာ္ဒယ္လ္ မိုးျမင့္သဇင္ရဲ႕ ပုံေလးေတြကို ၾကည့္ၿပီး အသည္းေလးေတြေပးခဲ့ဖို႔ မေမ့လိုက္ပါနဲ႔ေနာ္.. ။ ဒါ့အျပင္ သူမရဲ႕ ဆက္ လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းမယ့္ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္း ပရိသတ္ေတြက အားေပးၾကမယ္မလား……. ။
Previous post ပန်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်လှသွေးကြွယ်နေပြီး ရင့်ကျက်တည် ငြိမ်တဲ့အလှတရားတွေနဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဘေဘီမောင်
Next post အခုခေတ်မှာ retro trend ပြန်ထ လာတော့ ကျမအတွက် ကွတ်တိပဲ ဆိုပြီး အရမ်းကို မိုက်နေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ